25 Xogta Suuqgeynta Mobaylka ee 2014 ee Arrinta | Martech Zone
Waxaan haynaa shaqo aan ku qabanno qaabkeenna moobiilka oo bil kasta ayaan isbedel ku sameyneynaa si aan u horumarinno sida boggeena loo soo bandhigo. Ma ahan wax sahlan marka la eego dhammaan cabirrada kala duwan ee qalabka, laakiin kororka taraafikada mobilada ayaa sii wadda kororka kororka miisaska sidaas darteed waxaan ognahay inay tahay maalgashi weyn. Ma jiraan wax ka xanaaq badan marka aad gujiso xiriiriyaha oo aad ku degto bog aadan akhriyi karin markaad ku jirto taleefankaaga casriga ah ama kaniiniga.
Wac sanadka 2014 ee dhaqdhaqaaqa ganacsigu si dhab ah u qabsado. Ururradu runtii waxay u baahan yihiin inay sahamiyaan xeeladaha suuq geynta moobiilka si ay u ballaadhiyaan gaadhitaankooda. Iyada oo si deg deg ah loo qaatay BYOD, Fursadaha ayaa u koraya suuqleyda iyo bixiyeyaasha tikniyoolajiyadda. Isku soo wada duubida qalab kala duwan sida xisaabinta daruurta iyo xogta weyn waxay ka caawineysaa ganacsiyada inay sida ugu wanaagsan uga faa’iideystaan ​​dariiqooda cusub ee dhaqdhaqaaqa ku wajahan. WebDAM
Suuqgeynta moobiilka ee Mareykanka waxay ku socotaa wadadii ay ku soo saari lahayd $ 400 bilyan oo iib ah marka la gaaro sanadka 2015, halkii ay markii hore ahayd 139 bilyan oo doolar sanadkii 2012. Haddii aadan dib ula noqon istiraatiijiyaddaada weli, horay ayaad u lumineysaa dhulka waxaadna u baahan tahay inaad ku darto bogagga mobilada, barnaamijyada, fariin qoraal ah, iyo dallacsiin si loo soo qabto rajada ama dareenka macaamiisha markay baxsadka yihiin. WebDAM xogteeda ugu dambeysay wuxuu soo bandhigayaa 25 tirakoob xiiso leh oo ku saabsan isbeddelada hadda ka jira mobilka, saamiga suuqa mobilada, kororka isticmaalka mobilada iyo waxyaabo kale.
Tags: 2014tirakoobka suuq geynta mobiladatirooyinka suuq geynta moobiilkatirakoobka wareegatirooyinka wareega
Mahadsanid Douglas, farshaxan weyn. Xaqiiqdii waxay saameyn ku yeelan doontaa dad badan oo suuqley ah iyo istiraatiijiyadooda, maaddaama doorka suuq-geynta moobiilku uu noqday mid aad u muhiim ah, waana kuwan tirooyinka si loo caddeeyo.